DASSK R U not ashamed of the racist criminal comments under your posts? Keeping all these CRIMINALS’ comment also made DASSK’s FB admin committing crime | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeDASSK R U not ashamed of the racist criminal comments under your posts? Keeping all these CRIMINALS’ comment also made DASSK’s FB admin committing crime
DASSK R U not ashamed of the racist criminal comments under your posts? Keeping all these CRIMINALS’ comment also made DASSK’s FB admin committing crime
January 2, 2017 January 2, 2017 drkokogyi
DASSK, R U not ashamed of the racist criminal comments under your posts? Keeping all these CRIMINALS’ comment also made DASSK’s FB admin committing crime>>>ကိုစိုး မင်းထွန်း လူသိလဲလီးပဲပေါ့ကွာချသာချကုလားမတွေလဲမဒိန်းကျင့်ခံရတယ်ဆိုပဲလိုးကားလေးပါတင်ကွာနောက်တခါစောက်ခွက်ကိုလီးနဲ့ထိုးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်
1.6KYou, U Ko Ko Gyi, Aung Htet Htun and 1.6K others
AungSan Linn အကြမ်းဖက်ကုလားကိုရိုက်လို့အရေးယူခံရမယ်ဆိုအရေးယူတဲ့သူတွေပဲငှက်ပျောပွဲနဲ့သွားဖမ်းပေးပါ
Like · Reply · 23 · 14 hrs
7 Replies · 10 hrs
Chan Myae ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ sသုံးမကျတဲ့ ကောင် ။ မှတ်လောက်အောင် လုပ်ပေးလိုက်။ 😡
Kyi Phyu တစ်ခွန်းလောက်တော့ပြောလိုက်ချင်တယ်
Cho Myint Htay ဒီလိုအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိတဲ့ ဒီလိုဒေသမှာ အဲဒီလောက်ကိုင်တွယ်မှ တော်ကာကျပါမယ်…ဒီထက်ကြမ်းတဲ့ ကိုင်တွယ်မှုတွေ ကမ္ဘာမှာ အများကြီးပါ….
Like · Reply · 17 · 14 hrs
Kyaw San Lin ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ခွေးမရဲ့သားဖင်ယားမှုပါ
Like · Reply · 20 · 14 hrs
So Oo ကျေညာချက်ထုတ်ရင်လည်းဒီနိုင်ငံကတော့လက်ခံရင်လက်ခံလိမ့်မယ်ကမ္ဘာကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကရိုက်ထားတဲ့ဂျိုတုပုံတွေကိုကြည့်ပြီးနိုဘယ်ဆုရှင်တွေကတောင်းဆိုတာလို့သိရတယ်။
Soe Thu Moe ကိုးတန်ကောက်ကျေးရွာက မောင်းတောင်မှာလား ရသေ့တောင်မြို့မှာလား ????
D Naing Khant ကမ္ဘာကလက်မခံဘူးလားမကျေနပ်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုခေါ်သွားကြ
Myo Chit ကိုက်တဲ့ခွေးကို ကန်ကျောက်တာအပြစ်လား ခေါင်းကိုပွတ်ပေးရမှာလား
Khant Min အကြမ်းဖက်သမားကို
ရှိခိုးမေးမြန်းကြပါရန် …See More
Robben Lin ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ရဲရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကဘယ်လိုလုပ်အပြင်ပေါက်လာတာလဲ
Ro Kolay ဟားဟားဟား–===လူလိမ်တွေ–ဆက်လိမ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့- အမှန်အတိုင်းဝန်ခံလိုက်ရင်ပီရော့-
မောင် မောင် ဇာ video ရိုက်တဲ့ ခွေးမသားကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးပါ ။
Rikhiram Gautam ပါ ဘယ်ဖြစ် ဖြစ် မလုပ်သင့်အလုပ်ဘယ်လေ့”
Phay Soe မောင်တောမှကဒါမျိုးတွေနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေဒါ(၂)လဒေါင်ကျော်နေပါပြီ
Mg Mg Hla Aye ဇော်မျိုးထိုက် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးတဲ့ကောင်
Thant Zin နံပါတ်တုတ်နဲ့ရိုက်နေတာမှမဟုတ်ဘဲကွယ်ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့
ဇာ နည် နိုင်ငံတကားမှာလည်း ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးက ရှိနေတာပါဗျာ အင်္ဂလိပ့်ဘာသာနဲ့ပါ နိုင်ငံတကား သိအောင်ထုတ်ပြန်သင့်တယ်။မလေး ထိုင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေလည်း သွားရငလာရင်း ပိုက်ဆံညှစ်တဲ့ ရဲနဲ့တိုးရင် ပိုက်ဆံမပေးနိုင်လို့ ရိုက်နက် ကန်ခံရတာတွေ တစ်ပုံကြီး ဒါက ပိုက်ဆံတောင်းတာမဟုတ်ဘူး သတင်းစုံစမ်းရင်းဖြစ်ရတာ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ရှိမပေါ့
Kevin Chen ဗီဒီယို ၇ိုက်တဲ့ ၇ဲအား အေ၇း ယူ မှု မပြု သင့်ပါ ၊
ထို၇ဲ ကြောင့် တလွဲပြု မှု များအား.ဖော် ထုတ် နိုင်သဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ သိက္ခာအား ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့်အခြေ အနေ ဖြစ်ပါသည။်…See More
စိတ်ရောင် စုံ ရိုက်တာမဟုတ် ရိုက်ဖို့တုတ်နဲ့ရွယ်တာပါဗျာ။ ခစ်ခစ်ခစ်
Naing Lin Aung ခုထိစောက်သုံးမကျသေးဘူးဒိရဲတွေ
Minn Thu အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ ခွေးရူးကို ရိုက်သတ်
ရမှာပေါ့ ခွေးရူးကိုမသတ်ဘဲ အိမ်က
မိသားစု သားသမီးတွေကို အကိုက်ခံမှာ…See More
Tun Aung Cho စဉ်းစားစရာရှိတာက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကွက်ဆင်ရိုက်တာမျိုး ဖြစ်နေမလား။ ဒီဒေသတစ်ခုလုံးက လူအများစုဟာ အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ အလွယ်တကူမသိနိုင်ပါ။ အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းကြီးနဲ့ နောက်ကွယ်က OIC တို့ကို မြန်မာပြည်ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
Kyaw San Lin သေချာစစ်သင့်တယ် မူဗီရောင်းစားတာကောမဖြစ်နိုငိဘူးလား
Su San Thu အမေစုရေ ကျန်တဲ့ ရဲတွေကို အရေးမယူပါနဲ့ဗျာ။နိုင်ငံသားစစ်စစ်တစ်ဦးအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျူးကျော်ခိုးဝင် ရွာလုံးကျွတ်အကြမ်းဖက်သမားတွေကို မောင်မောင်ဘဘ လုပ်နေရင် သူတို့လူအင်အားနဲ့ အကုန် ပြန်သတ်မှာပေါ့။ ရန်သူသတင်းပေးကို ကိုဟ်တိုင် ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တာ ဘယ်…See More
Like · Reply ·9· 14 hrs · Edited
Kyaw Zin English Version ထုတ်ပြန်ပါ
စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေမှာရန်သူမှန်သမျှတော့ ရန်သူလိုဆက်ဆံရမှာပါ …See More
K Lin Thu ဖင်ယားမူ အာမခံမရဘူး အခုတော့
Kyaw Yarzar နည်းနည်းလေး နှာစေးနေတော့ ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲ.
ဒါဟာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို တကယ်လုပ်ရကိုင်ရတာ ခက်ခဲစေတယ်. အကျပ်တွေ့စေတယ်.
Chit Lay တချက်လောက် ထိုင်းတောင်ပိုင်းက မွတ်တွေကို ထိန်းသိမ်းပုံလေး ကြည့်ပေးပါ ပီးတော့ တရုတ်က အီဂါလား ဘာလားမမှတ်မိတော့တဲ့ မွတ်တွေကိုတရုတ်က ထိန်းသိမ်းပုံလေးကြည့်ပေးပါ ပီးတော့ ဖိုင်တင်တဲ့ရဲရဲ့ ခံစားချက်ကိုလဲမေးကြည့်ပါအုန်း
Axintun Axintun တော်တော်လက်ဆော့တဲ့ ရဲစုပ်..
ဒီလိုရဲစုပ်တေ ဖုန်းကိုင်ခွင့် ကန့် သတ်
Kw Hlwin ရဲလုပ်ပြီးစောက်သုံးမကျချက်ကတော့9လောက်ရှိတယ်
Like · Reply · 13 · 14 hrs
Tun Aung Cho မယုံကြပါနဲ့။ မကြာသေးခင်ကပဲ အစ္စလိမ်မစ်တွေရဲ့ လိမ်ကွက်တစ်ကွက် ပေါ်သွားလို့ ဗြိတိသျှသတင်းဌာနတစ်ခု အတော်ထိခိုက်သွားသေးတယ်မဟုတ်လား။ ဒါနောက်ကွယ်က အစ္စလာမစ်အကြမ်းဖက်နယ်ချဲ့အန္တရာယ်ကြီး ကပ်ပါလာပါတယ်။ သတိထားကြပါ။ မဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာသိအောင်ပြကြပါ။
Aung Win Zaw ရိုက်ရုံရိုက်တာလည်မလှီးကြောင်းပြောလိုက်ပေါ့
Tun Aung Cho အစ္စလာမစ်ဆိုရင် မလုပ်ရဲတဲ့အကုသိုလ် ဘာမှမရှိဘူး။ လူတောင်စိမ်ပြေနပြေသတ်နေတာ၊ လိမ်တာညာတာလောက်ကတော့ ထမင်းစားရေသောက်သလောက် မရှိဘူး။
Khing Hein ဒီဖ်ိုင်က ဘယ်လို online ပေါ်ရောက်လာတာလဲ
ဇော်မျိုးထိုက်က သူ့accမှာ တင်တာလား
သူ့ acc name က ဘာလဲ…See More
Su Nyein Ei
Punk Punk Black လူမှုကွန်ယက်တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုဟင်ဂျာများကို ရိုက်နှက်နေသည့် ဗီဒီယိုမှာ ရသေ့တောင် ကိုးတန်ကောက်တွင် ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်
Aung Myint အသားထဲက လောက်ထွက် တဲ့ ကောင်ကို ဝိုင်း ရိုက်သတ် ။
ဒူချီယာတန်း မှာ ရဲ တပ်ကြပ်ကြီး အရိုးအသား ရှာမရ အောင် သတ်ခံ ရတုံး က ဘယ် ကုလား မှ မေးလို့မရဘူး ။
ကု …See More
Punk Punk Black ခွေးမသား ရဲတွေ နှမလိုရဲတွေ မင်းတိုအလှည့်လာမယ် ခွေးလိုမစာတွေ
Maung Paing ကန်တဲ့ရဲကိုအရေးယူမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ် လူဆိုးတရားခံကိုသွားဖမ်းတာနော်
Myint Zarni ရဲတွေကီးပက်ဖုန်းပဲပေးကိုင်တာကောင်းမယ်
Muhammad Iqbal Bamar twe luseit pyauk kone kya pi,thay chinn soe kone kya top mal.
Khinn Yi စောက်လုပ်စောက်ကိုင် မရှိတော့ အလုပ်လုပ်ပြနေတယ်ပေါ့…
မိုး လေး ပုံနှင့်တကွဖြေဆိုပါ စာသည် ၆ တန်းအောင်ရင်ရေတတ်ပါ
Tun Aung Cho အရေးယူခြင်းယူရင် အစ္စလိမ်မစ်တွေကို အရေးယူရမှာပါ။ တခြားသူအရေးယူဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
Naywin Aung ဘောမဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ပါ
Saw Win တကယ်တမ်း အရေးယူရမှာက
Video ရိုက်ပြီး fbပေါ်တင်ခဲ့တဲ့သူကို
အရေးယူရမှာ၊အခုတော့ အကြမ်းဖက်သမား…See More
Like · Reply · 12 · 14 hrs
Mg Mg Rose ရဲများတွင် ကုလားအထောက်အပံ့ ရရှိထားသူများ ပါဝင်လျက်ရှိသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
Moe Thazin Nwe လူသတ်စစ်တပ်
7 Replies · 15 mins
Moe Thazin Nwe လူသတ်အစိုးရ
ED Hanif အမှန်တရားဟာအင်းအားအလွန်
Israel Solomon Video ရိုက်တဲ့ ကင်မရာမန်း 😀 ဇော်မျိုးထိုက်ကို ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဘာဖြစ်သွားလဲ ?
Jhon Wood တချိန်လုံး လူအခွင်းအရေးချိုးဖောက်မူ မရှိဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေကြတဲ့ အစိုးရက ဒီvideo fileသည် လူမူကွန်ယက်ပေါ်မှ တက်မလာဘူး ဆိုရင် တာဝန်ရှိသူများက ဆက်ငြင်းကြမှာဘဲလေ။
အဲဒါကြောင့် ကိုယ်အသက်ကို အရဲစွန့်ပြီး ဒီလိုမျိုး videofile ကို လူမူကွန့်ယက်ပေါ်မှ တင်ကြတဲ့ ဆိုက…See More
8 Replies · 11 hrs
Htar Htar Thet စောက်ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ငမိုက်သားတကောင်ကြောင့် မဆီမဆိုင် အရာရှိတွေ ပြသာနာဖြစ်ပြီ သူတောင်းစားလေး လက်ကမြင်းချက်…ရဲတွေအသားလွှတ် လာသတ်နေတဲ့ ကုလားတွေကို ကန်ကျောက်ရုံတင်မက အမှန်မှာ တကောင်မှ အရှင်မထားသင့်ဘူးး အကုန်ပစ်သတ်ပစ်ရမှာ
ဘယ်ကုလားကောင်းလဲ ပြစမ်းမှာ ခုစိန်နားကပ်ရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်နေတဲ့
ဘုရင်က တော်ကောက်လို့ဆင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ အတိုင်ပင်ခံကြီးရဲ့ ဆရာကြီး ငနီရော ကောင်းသလားး?
Naung Yoe ဟုတ်လား ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အစစ်ခံရင် ဘယ်သူမှလက်မပါဘူး
Ko Ko Thu အပြင်ရန်.အတွင်းရန် တွေဖောင်းပွနေပါပေါ့လား ?
Langle Thang အ.. ရဲရယ်
Myo Naing Htun ကွာလ လန်ပူ မြို့လယ်ခေါင်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် နံပါတ်တုတ်နဲ့ မြန်မာတွေ ကိုရိုတ်တာ ဘာအသံမှ မကြားရပါလား
Like · Reply · 16 · 14 hrs · Edited
Kyaw Hlaingwin တရားခံ ကိုဖမ်းတာ ဘာဖြစ်လည်း tv က live တောင် လွင့်ပြလိုက် ထိုင်းတောင် ပိုင်းမှာ ဆော် တော့ တီဗွီက ပါတိုက်ရိုက် လွင့်တာ။တရားခံကို အုန်းငှက်ပျော ပွဲနဲ့ ပင့်ရမှာလား ဘယ် ရဲ မှ အရေးယူစရာ အ ကြောင်းမရှိ ဒီကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သတ်လို့။
Moe Thazin Nwe မြန်မာ့တပ်မတော်က နယ်မြေရှင်းလင်းနေတာပါ။
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆုိုတဲ့…See More
10 Replies ·7mins
Su Latt ဒီဖ်ိုင်က ဘယ်လို online ပေါ်ရောက်လာတာလဲ
AungMoe Lwin ရည်ရွယ်ချက်ပါပါ
သံသရာ ခရီးသည် သံတမန်ရေးနဲ့အမျိုးသားရေးခွဲခြားသိကြပါရိုက်သတ်ရမှာကvideoရိုက်တဲ့ကောင်
Yazar Yazar သိပ်တော့ အခြေအနေ မကောင်းဘူး သိပ်မကြာခင် ၄လောင်းပြိုင် အကွက်နဲ့ပဲ နှုတ်ပိတ်ခံရလိမ့်မယ်…. ဇော်ခွေး Plan စဆွဲနေပြီ။
Wai Thar Li ဒီကောင်ကွာကမ္ဘာကမသိအောင် တိတ်တိတ်လေးသတ်နေတာ အခုတော့းးးးးးးးး
Myanmar Pyi Thar Lay အရေးယူရင်
Aung Soe Myint အဲဒီနေရာမှာ Human Right ထက်
National Security ပိုအရေးကြီးတယ်။
Moe Thazin Nwe မှးဇော်ု ရုပ်ကခွေးဝဲးစားရုပ်နဲ့စောက်ရှက်မရှီဘူးပြောင်လိမ်နေတာခွေးမသာ
တိမ် တမန် ကပ်ထားတာက ကူညီပါရစေ လက်တွေ့မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ ကူညီလိုက်တာကမ်းကုန်ပဲ နှစ် ၂၀ မှာစင်ကာပူကို ကျော်တက်မဲတဲ့ ဟ ဟာ ဟားဟား လို့ရီလိုက်ချင်တယ် နှစ် ၂၀၀ တောင်မှဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်နိုင်အုံးပါ့မလား
Min Wi Thaw ဇော်မျိုးထိုက် ဆိုတဲ့ သစ္စာဖောက်ကို ပို့ပေးလိုက်ကြကွာ
Łm Hàñ Pls release English version ASAP!
Zayar Kyaw စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေမှာဒီလောက်ကတော့ရှီမှာဘဲလေ အရပ်သားအကြမ်းဖက်သမားဆိုတော့ဘယ်ချော့နေလို့ဖြစ်မလဲဘယ်နိုင်ကြည့်ကြည့်ဒီလောက်တော့ရှိတာဘဲ
Myint Soe .
Myo Kyaw စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေမှာအကြမ်းဖက်သမားရှာဖွေတာ အကိုတို့ရေလာကြပါ တွေ့ချင်လို့ပါ အာဘွား ဆိုပြီးသွားလုပ်လို့မရဘူး တန်းမစီပဲပုန်းနေတဲ့သူ ပေကပ်ကပ် ဂျစ်ကန်ကန်လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ပြီးရန်ပြုသူတွေကို အခုလိုပဲလုပ်ရပါတယ် နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ ကုလားမှ ဗမာမှဆိုပြီးခွဲခြားပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ပါ
ဆရာမ ဒေါ်မြမြဝင်း .
Thar Khant ရဲတွေဒီလေါက်အသတ်ခံထါးရတာ နာကျည်းနေပြီပေါ့ သူတို့တောင်မသေလို့ကျန်နေတာ အဓိက က vရိုက်တဲ့သတောင်းဇားကောင်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သိက္ခာကျ ပြီးပြသနာပေါင်းစုံ ဖြစ်ရတာ
Ko Han စစ်ဆင်ရေးကာလစစ်ကြောင်းသွာလာနေချိန်တာဝန်ရှိသူအရာရှိမှလွဲ၍တယ်လီဖုန်းအသုံးမပြုရ။ကီးပက်တာကိုင်ကွာအဲခွေးသားဗွီဒီယိုရိုက်ပြီးဒုက္ခပေးလိုက်သည်နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုပေါ့
Like · Reply ·5· 14 hrs · Edited
Soe Tun English version သတင်းလေး လုပ်ပါဦးဗျုိ့
Pyae Nyein မအေလိုး ဇော်မျိုးထိုက်
Soe Tun ပြည်တွင်းနေ မြန်မာပြည် သစ္စာဖေါက်တွေ ဘင်ဂလိမ်အတွက် အစွမ်းကုန် ဖျင်နာနေကြပီ
လောက်ကောင် ဘယ်သူတွေလဲ ဒီအချိန်မှာ ပေါ်ပီ
Tone Tone အရေးယူမယ်ဆိုရင်Videoရိုက်တဲ့ရဲတပ်သားကိုဘဲအရေးယူပါကျန်သောရဲများအရေးယူရန်မသင့်ပါ
Soe Tun ငလူးမရဲ
မင်းတို့ကို ကုလားတွေအကြမ်းဖက်တုန်းကတော့ မိမိရရ မှတ်တမ်းမတင်နိုင်ဘူး
ဘင်ဂလီ ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်လုပ်တာကျ ဖျင်ယားပီး ရိုက်ထားရတာလား ငလူးမရဲ့
Soe Myint တရားခံဖမ်းတာ ကန်တော့ပြီးမှဖမ်းရမှာလား
Tun Aung Cho တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆွပေး၊ ရန်ပြုပြီး နှိမ်နင်းတဲ့အခါကျတော့မှ ရိုက်ယူသလား။ ဆင်ပြီးလုပ်တဲ့အကွက်ပေါ့။
Wai Myo Oo အဲဒါ အနီးရန်သူပဲ့
Ro Kolay တခုတော့မေးချင်-
ခုvideo ရိုက်ပေးတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကို အင်တာနက် စာမျက်ပေါ်တွင်-သစ္စာပေါက်ဘာညာဆိုပြီး အမျိုးမျိုးဆဲဆိုစော်ကားနေကြောင်းတွေ့နေရပါတယ်-
တကယ့် သူက သစ္စာပေါက်လား ? အမှန်တရားကို လိုလားသူလား ? အဖြေပေးပါ-…See More
Like · Reply ·5· 13 hrs · Edited
Thalinn Phyu ဦးနှောက်မရှိလိုက်ဒါဗီဒီယိုရိုကိပြီးလိုင်ပေါ်တင်စရားလားတော်တော်စောက်သုံးမကျတဲ့ရဲသား
Aye Myint FILE ရိုက်တဲ့”ရဲ”က
Kokyawgyi Kokyawgyi ရဲတပ်သားဇော်မျိုးထိုက်
Thura Aung ဟာ ပေရှည် ပါတယ် VDO ရိုက်တဲ့ကောက် အသေသတ်ပလိုက် ဒီကောင် ဆက်ရှိနေရင် အဖွဲ့အစည်း သိက္ခာ ပျက်မှာပဲ
Min Ko Videoရိုက်တင်တဲ့ကောင်သတင်းရောင်းစားတဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးပါ ကျန်တဲ့ရဲတွေအရေးမယူသင့်ပါဘူးစစ်ဆင်ရေးနယ်မြေသတ်မှတ်ထားတာလေ
Htoo Win ရဲပါဆိုရိုက်စစ်တာကန်စစ်တာရှိမှာဘဲ
Bu Naing ကုလားကိုတော့ကြောက်တယ် ဒီထက်မက တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ နိပ်စက်ခဲတာတွေသိရက် နဲ့မဟခဲဘူး ဟာသ
Autumn Breeze ကဲ ကဲ
ဒီပို့စ်မှာ ခွေးကုလားဒေ ဟောင်ကြစေ
ဆီးရီးယား မှာ စစ်တပ်က ဘယ်လိုကိုင်နေလည်းလေ့လာအုံး…See More
Aye Kyaw ကုလားဆိုတာ သဘောထားအမှန်နဲ့ဆက်ဆံမရဘူး
Lin Htaik Aung စစ်ဆင်ရေးလုပ်ပါတယ်ဆိုမှ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်အဖြေရှာရေး လုပ်နေတာမှ မဟုတ်တာ
Mg Mg ရဲတပ်သားဇော်မျိုးထိုက်မှာတာဝန်ရှိတယ်
Ko Aungmyomyint ဖင်ယားပြီလိုင်းပေါ်တင်တော့ အဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့
Kyaw Thu Naing အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခြေဖျားတောင်မမှီသေးဘူး … ဒီလောက်ကန်တာလောက်များ … ကုလားအားပေးတွေနဲ့ ကုလားပေးစာကမ်းစာ စားနေတဲ့သူတွေကတော့ နာမှာပေါ့ … အမျိုးသားလုံခြုံရေးက အဓိကပဲ … မကျေနပ်ရင် ဒို့နိုင်ငံမှာမနေနဲ့
John John John ဘမာလူမျိုးကအမှန်တရားကိုမနှင့်သက်ဘူး
VDO ရိုက်တဲ့ကောင်ကချီးပုံဆိုအခုတဘက်…See More
ပစ် တိုင်းထောင် Vedio ရိုက်တဲ့ ရဲတပ်သားကို များများဆုံးမရမှာ။
Myat Khantko တင်သင့်မတင်သင့်မစဉ်းစားဘူး…..အဲကောင်ကတမင်တင်တာလားမသိဘူးထောင်ချပစ်
Ko Ko Mg ထရန့်ကိုအတုယူပါ
Tauk Htun Thein အမှန်တရားဆိုတာကိုယ်လိုတာလေးကိုပဲ
Like · Reply · 8 · 13 hrs · Edited
MD Shah Arkani မလိမ်ပါနဲ့ကွာအတောက်အထားဒီဟာတစ်ခုတဲ့မဟုတ်အများကြီးရှိတယ် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာအရှက်ကွဲစရာနောက်ထပ်အများကြီးလာပါအုံးမယ်စောင့်နေကြပါ အရှက်ဆိုတဲ့ဟာကရှိကောရှိရဲ့လား မရှိရင်အပြင်ကနည်းနည်းလောက်ဝယ်ထည့်ပေးရင်ကောင်းမယ်
Aungmin Arakani Foke news
Thant Zin မည်သို့လိမ်ညာဖုံးဖိကြမည်ဟုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသကာလကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်လေသတည်း
ဂျေ ဂျေ ကေ စစ်ဦးဆိုတာ ဘီလူးဆိုင်းနဲ့ကရတယ် ရဲတွေမှန်တယ် အာ့လိုပဲကြမ်းရမှာပဲ သူတို့တောင်ရဲစခန်းထဲထိလာပစ်လို့ ကိုယ့်လူတွေအထိနာရသေးတာပဲလေ လူပေါ်ပြာကျရင်တော့ ခွေးပေါ်ခါချရမှာပဲ
Like · Reply · 13 · 13 hrs
John Brown ကိုယ်ခံရရင်တော့ ဘယ်သူမဆို ပြန်ကြမ်းမှာပဲ ရဲမှာ အပြစ်မရှိပါ
Kyaw Tun ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုယ်နားမလည်သော တိရစ္ဆာန်
Lwin Ko Ko စစ်ဆင်ရေးကာလမှာတော့ အမှားအမှန် မမြင်ဘဲ စစ်ဆေးကြရတာဘဲ အရင်အစိုးရတွေတုံးကလဲ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို နည်ူးမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက် စစ်ဆေးခဲ့တာဘဲ တချို့ဆို ရ ရှိကဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဘဲ သေသွားရတာ အဲဒီတုံးက မီဒီယာ တွေ မပါဘူး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာလဲ နည်းမျိုးစုံနဲ့ စစ်ဆေးကြတာဘဲ ဒီ ရခိုင်ဒေသမှ လာပြီးပြသဏာရှာသလိုဖြစ်နေတော့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မထောက်ခံပါ
Aung Ye ငါလိုးတယ် ရူပ်နေတာပဲ
Koko Naing စောက်သုံးမကျတဲ့ရဲစုပ်…
Myat Kyae Hmon ဗီဒီယို ရိုက်တဲ့သတောင်းစား မသာ အသေသတ်ရမှာ
Linlatt Koko ခွေးသား ရိုက်ပြီး ငြိမ်မနေဘူး ငါလိုးမသား
Ko Naung တကယ်အပြစ်ရှိတာ အဲဒီဗီဒီယို ရိုက်တဲ့ ရဲတပ်သား ဇော်မျိုးထိုက်လည်းမဟုတ်၊
သူ့အထက်အရာရှိ ဒုရဲအုပ်တေဇာလင်းလည်း မဟုတ်၊…See More
Arrow Arrow နိုင်ငံရေးရှုပ်နေပါတယ်ဆိုမှဦးနှောက်လေးတော့
Thet Oo Ko Ko အတိုင်ပင်ခံရုံးကိုလဲ မဆဲချင်ဘူးနော် ကိုယ့်ကိုသတ်နေတဲ့ကုလားကို မရိုက်ပဲနဲ့ ထိုင်ကန်တော့နေရမှာလား
Islam Kaung Lay ဘမှားအစိုးရနဲ့ ဘမှားအစွန်ရောက်တွေ အ
Aung Zaw Latt ဇော်မျိုးထိုက်….
Myat Aung ဒီပြသနာတွေရဲ့အစက ဘင်္ဂလီကုလားတွေကရဲစခန်းဝင်စီးပြီး အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်သွားတာက စတယ်ဆိုတာမမေ့ကြပါနဲ့…
….အကြောင်းမရှိဘဲ လည်လှီးသတ်ဖြတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ နယ်မြေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ရင်းနဲ့ စည်းကမ်းနည်းနည်းလွဲသလောက်ကလေးမျိုးဖြစ်ရုံလေးပါ….ဒီလောက်ထိရေးကြီးခွင်ကျယ်လာလုပ်မနေကြနဲ့။ …See More
ကြယ်စင် ဝိုင်းခ အချ င်းချ င်းဒုက္ခပေးလိုက်ပြီ
Tin Lay Zaw လူမဆန်အောင်ရိုက်တဲ့ရဲကို အပြစ်ပေးရမှာဟ…
Kyaw Thar Saung ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ရဲကိုထောင်ချပါ
Hnin Maung ရန်သူကို မရိုက်ရဘဲ ချော့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲမဝင်တော့ဘူး။
Zayyar Aung ဇော်မျိုးထိုက် ကို အပြစ်ပေးပါ
Arakan Awngnyeim Warm ပြည်ကကုလားတေမြန်မာစာမတက်ဘူးဗျ
Zaw Lwinn ပေါတော့လီးဖြစ်လားတို့နိုင်ငံဒို့သဘောနေခြင်မှနေဒိုနိင်ငံမှာနေရင်ဒို့သဘောကွဒို့ဥပဒေအတိုင်းပဲဒါကျုးကျော်
Kyaw Kyaw Moe ရိုက်တင်တဲ့ရဲခွေးသားကိုသတ်ပစ်ကွာ
Htun Win ခုကိစ္စက ကုလားကိုရိုက်လို့တင်းနေတာမဟုတ်ဘူး
Soe Thu Moe မောင်တောအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ရသေ့တောင်မှာ လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့
ရိုဟင်ဂျာတို့ ဆက်နွယ်မှု လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိ
U Aye Lwin ဒါပဲလေ။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ ရဲကပစ်တောင်သတ်တယ်။ ပြသနာတွေဖြစ်တယ်။ အတူတူပဲပေါ့။ အရေးကြီးတာက ဥပဒေနှင့်မညီရင် အဲ့တာဝန်ရှိသူကို အရေးယူရမှာပေါ့။ တစ်ဦးချင်း ဆေင်ရွက်ချက်ကြောင့် အကုန်လုံး အေးစေသတည်းဆိုရင်တော့ စည်းကမ်းထိန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။
Ne Tun လူသတ်နေတာမှ မဟုတ်တာ….
ထိုင်း…မလေးမှာ …မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ…
ဘယ်လို ပုံစံမျိုး ဖမ်းခံရလဲ…..…See More
U Ye Kyi စစ်ဆိုတာသူပစ်ကိုယ်ပစ်ဘဲ
Tin Lay Zaw Video ရိုက်တင်သူ မှန်တယ်
ဥပဒေ ထိန်းသိမ်း ရမဲ့သူက လက်လွတ်စပယ် လုပ်နေတာကို သူတတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ချပြခဲတာဘဲ
Touk Htun သေနပ်နဲ့ရဲစခန်းဝငိပစ်သွားလို့ရှင်းတာဘဲ ဘာုဖစ်လည်း ကန်တော့ပွဲနဲ့ဖမ်ရမှာလား
Ko Zaw video ဖိုင်ရိုက်ပြီးတင်တဲ့
K Myo Naing နိုင်ငံတကာမှာစောက်ရှက်ကို လုံးလုံးကွဲတာပဲ
Sayed Alam If you dare take action to your home minister,he is responsible person for all of this.
Blue Smith အချုပ်အခြာ အာဏာ က ပြည်သူပိုင် မဟုတ် တဲ့ အာဏာရှင် လက်ကိုင်တုတ် တွေရဲ့ လက်ထဲမှာ (၂၀၀၈ ခြေဥ အရ)။ အာဏာရှင် တွေ ပြုစုတဲ့ ခြေဥ ကို သစ္စာ ခံ ရသူ တွေက NLD။ ပြည်သူ လူထု ထောင်ချီ သတ် ခဲ့တဲ့ တရားခံ တွေ က ဘာမှ ရှင်း စရာမလို။ ကုလား တွေကို သတ်လို့ တိုင် ပတ်နေကြဘီ။ ဒီ ကုလား တွေကို လက်ခံ ခဲ့ကြတာက ကြံ့ဖွတ် (white card) ။ အချူပ်အခြာ အာဏာ က ပြည်သူပိုင် မဟုတ် သရွေ့ NLD တွေ ရဲ့ ကတိစကား တွေကတော့….
Soe Wunna စစိဆင်ရေးနယ်မှာ တအိမ်တက်ဆင်း စစ်ဆေးခံဖို့ ကြွကြပါဗျို့လို့ ခေါ်ရမှာလား….ပေကပ်ကပ်လုပ်နေတော့ ရဲတွေ…ဗျင်းပေးတာ မိုက်တယ်….video ရိုက်တဲ့ ရဲ အသားထဲကလောက်ကိုတော့ သေဒဏ်ပေး….
..လူထုထောက်ခံရင် comment like များများပေး….
Lwin Aye အဲ့ ရဲခွေးမသားတွေကို နိုင်ငံတော် လှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှုနဲ့ သေဒဏ်သာချ ။ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ကို အားလုံးနဲ့နုိုင်ငံတစ်ကါ အပြောခံရအောင် ခွေးဖြစ်အောင် လုပ်တာ ။
Htay Lin မေတ္တာသုတ် သာရွတ်ပြီး ကင်းလှည့်ကြပါတော့ကွာ။
Thant Zin ရသေ့တောင် ကိုးတန်ကောက် ကျေးရွာကို စစ်သားများ ၀င်ရောက် စီးနင်း၍ ဒေသခံများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ဖမ်းဆီး
Myo Min Thant စဉ်းစားစရာရှိတယ်. . .ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးလိုင်းပေါ်တင်တာ စဉ်းစားဥာဏ်နည်းလွန်းလို့လုပ်တာလား?
ဒါမှမဟုတ် အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်ကို အပုတ်ချချင်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရိုက်ကူးပြီးတင်တာလား?
သတင်းရောင်းစားချင်လို့လုပ်တာလား?. . ပထမတစ်ခုဆိုရင်တော့. . ပုံမှန်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုသာလုပ်သင့်တယ်. .နောက် ၂ ခုဆိုရင်တော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသင့်တယ်. . .
Arrow Demon အဲ့ဒီရဲကို ဆုချသင့်တယ် သေအောင်ရိုက်စောက်ခွေးကလားတွေကို
Ngul Pao တော်တဲ့ ရဲသားပဲ
Ngul Pao ဗမာတွေက အမှန်တရား မကြိုက်မှန်းပေါ်လွင်နေတယ်
Nay Nyein Thwin Aung ရဲတပ်‌ဖွဲ့ဆိုတာ ရှိကိုမရှိသင့်‌‌တော့ဘူး နိုင်‌‌ငံ‌တော်‌က‌ပေးတဲ့ လစာစားပြီး ချီးဖြစ်‌သွားတဲ့‌ကောင်‌‌ဒွေ ပြည်‌သူကိုကျရင်‌ ဒုက္ခ‌ပေးပြပါလိမ့်‌မယ်‌ ‌စောက်‌‌ကောင်းကျိုးမ‌ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း
Nay Lay ငါလိုးမ
စိုင်း လေး နိင်ငံတော်ပုန်ကန်တဲ့ နယ်မြေမှာ ရဲဝန်ထမ်းတွေက မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ လုပ်နေရင် နောက်ထပ်ရဲဝန်ထမ်းတွေ ထပ်ပြီးသေကုန်မှာပေါ့ လက်နက်ကိုင်နှင့် ဘော့ပင်ကိုင်ဟာ နေရာဌာနခြင်း မတူဘူးနော နယ်မြေကြမ်းတမ်းမှုနဲ့ အေးချမ်းကွဲပြားဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားစေခြင်တယ်
Like · Reply · 11 · 12 hrs
နေ ဝင် ချိန် ငါတို့နိူင်ငံသားတွေခံရလို့ ခံစားချက်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာ
ဘာဖြစ်လဲငါသာဆို ငါမိသားစုကိုလုပ်ရင် အဲဒီကုလားတွေ
La Wan စိုးသူမိုး ခွေးကုလား နေစရာမရှိဆိုတာကို
သိတယ် မဟုတ်လား ပတ်သက်မူ့ရှိ သည်ဖြစ် မရှိသည်ဖြစ် ဘယ်ကုလားကို မှ မထားဘူး
Nay Chan Nyein အေးဗျာ အမှန်က လက်အုပ်လေးချီ အစ်ကိုတို့ ဒီဘက်ကြွပါ ဒီမှာ ထိုင်ပါ ခင်ဗျ လို့ပြောသင့်တာပေါ့
Pan Lay လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါပဲ
လူပျို ကြီး ရိုက်တဲ့ရဲကိုပါ ဖမ်းပေးပါ အမျိုးသားသစ္စာဖောက် video ဖိုင်ကို ကုလားဆီရောင်းစားတာပဲဖြစ်ရမယ်
Saya Ko Ko Maung ကျက်သရေတုံးတာလေ
Ingun Jawa အောင်မာ ကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွင်းတုန်းကဒီထက်အဆတစ်ရာလောက်ဆိုးသေးတယ် အရေးမပါတာ
Soe N Phyo လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဏ်ရာမပေါ်ပဲသေအောင်တောင်လုပ်လို့ရတဲ့ ရဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဘယ်အချိန်ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့သေသွားမှန်းတောင်မသိလိုက်တဲသူတွေတောင်ရှိတယ် အခုဟာကအရှင်းကြီးပါ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်ပီးတော့ လိုင်းပေါ်ကိုတင်တာ စဉ်းစားပေါ့အရင်တုန်းက …See More
Kozaw Aung ဘာဖြစ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က face book တင်ထားလဲ
Aung MyinThu video file ကိုရောင်းစားတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်
Kyawt Shinn နိုင်ငံတကာနဲ့စာရင် ဒါကပျော့လွန်း
တယ် အကြမ်းဖက်သူတွေက်ို လက်အုပ်
စစ် မုန်း သူ သူတင်ပြချင်တာက ဘာလဲ ဒါကိုသိဖို့လိုတယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတော့ ခုံစုံစာမိပြီ ရဲတွေဘဝက စုပ်လည်းဆူး စားလည်းရူးဖြစ်နေပြီ
ThuDaw Sein အသားထဲကလောက်ထွက်တာဗျာ့။သစ္စာဖေါက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်ချင်လို့မရဘူး။
Naing Lin ဒီဗွီဒီယုိဖိုင်က တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကနေ ဘယ်လိုပဲ သတင်းထုတ်ပါစေဦး ဆက်ပြီး ဒီရဲတစ်ဖွဲ့ လုံးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တခုလုံးကုိ ဖုန်းနဲ့ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းယူတဲ့ရဲ ဖြစ်စေ တဖွဲ့လုံးဖြစ်စေ ၊ အပြင်က ရိုဟင်ဂျာ…See More
4 Replies ·9hrs
Nay Htoo Naing ဘယ်မှာလဲတရားဥပဒေ ပြောတော့ICRC ကလာစစ်လို့ရတယ် ဥပဒေအတိုင်းလုပ်နေတာ အခုကသက်သေရတာကိုဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြနဲ့ ဖမ်းထားတဲ့သူ့ထဲကဘယ်နှစ်ယောက်သေပြီးလဲ လူလိမ့်အစိုးရ ICCကိုတက်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါဗျာ
5 Replies ·6hrs
Kyaw Htike video ရိုက်တဲ့ခွေးသူတောင်းစားနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေကို
Aung Ngwe တကိုယ်လုံးမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအပြည့်ရှိကြလိမ့်မယ်။
Manung Maung Tin I must give award those who recorded this video because he proved and show with witness to the world communities that how his atrocities Myanmar government did with Rohingya and how tortured and merciless.
Zin Yaw သေနတ်နဲ့ လာ ပစ်တာ ကို မရိုက် လို့ မကန် လို့ ထိုင် ရှိခိုး ခဲ့ရ မှာ လား
Aung Myint Soe သွားပြီ
ကိုယ့်တပ်ဖွဲ့ ဝင် တွေ စီစစ်
ကဆန်လုပ် နေရင် ဒီလိုမလုပ်လို့ 
ကမ္ဘာမှာ လူသားမဆန်စွာ နိပ်စက်
ဒီနယ်မြေက သာမန် ဆူပူလို့ 
ရှင်းလင်းနေရတဲ့ နယ်မြေမဟုတ် ပြည်ပစွက်ဖက်မူ့ နဲ့ 
ကမ္ဘာ သိ ပါ ဒီလိုကိစ္စကိုဒီ
ရာ မလိုပါဘူး အချိန်တန်
အနောက်တံခါး မှူးလေး တောသားမြို့ရောက် ရဲထဲရောက်မှဖုန်းကိုင်ပြီး fb တင် လိုက်ကွန်မန်း တွေလိုချင် တဲ့ခွေးသား ဖင်ယားတဲ့ကောင် ကောင်းတယ် သေပလေ့စေ မသနားဘူး ညောင်သီးစားပြီး လေးသံမှ မနားထောင်တာ သိတာသိမမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့စကားကို မသိတဲ့တောသားမြို့ရောက် မသနားဘူး
Manung Maung Tin လက်ညှိုးတွေ ထိုးနေပါလား-
ကာချုပ်ကြီး ဆိုလား နှစ်ကူး မိန့်ခွန်းမှာ “အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အခက်အခဲ မဖြစ်စေဘို့ ရှမ်း/မြောက်နဲ့ ရခိုင်မှာ တပ်မတော်က ဖြေရှင်းပေးရတာ” ဆိုပါလား-
Genocide နဲ့ ငြိ၊ ICC ဆိုတာ သေချာနေမှန်း (ပြည်သူတွေ မသိပေမယ့်) အစိုးရ တစ်ရပ် အနေနဲ့ အတွင်းထောက်လှန်းရေးအရ သိထားပြီ ဆိုတော့- အတင်းအဓမ္မ NLD အစိုးရ ခေါင်းပေါ်ထိုးချတာလား? သို့တည်းမဟုတ် နိုဘယ်ဆုကြီးနဲ့ ကာကွယ်ဖုံးဖိလို့ ရမယ် ထင်လို့ (ဘ၀င်မြင့်ပြီး) ခေါင်းပြောင်းယူပေးတာလား?
ဘယ်လို ဖြစ်ဖြစ်ပါ။- ကျုပ်တို့ဘက်ကတော့ ICC ပေါ် ဒရွတ်တိုက် ဆဲတင်မှာပဲ။
အော် ဒါနဲ့ လူ သန်း ၅၀ ဆန့်တဲ့ ထောင်ကြီးဆောက်ထားလိုက်လို့တော့ ဖင်ခေါင်းမကျယ်နဲ့ ဦး- Genocide ကျူးလွန်ခဲ့သူ လူ ဘယ်လောက်များများ- ICC မှာ ဖြေရှင်းနည်း ရှိတယ်။ တစ်ယောက် တစ်ဖဲ့မှ လွတ်တယ် ဆိုတာတော့ မရှိပေဘူး။ နှစ် ၅၀ ကျော် ပုန်းနေရင်လည်း မလွတ်ပေဘူး-။ ဆိုတာလေးလည်း လေ့လာထားပါဦး။ နာဇီတွေကို ဘယ်လို ရှင်းခဲ့သလဲ နမူနာ ယူပေါ့ဗျာ။
Ingun Jawa စောက်ပေါကြီး 😂
Khun Naung အစ္စရေးမှာဖင်ခံနေရတာလေးထည့်ပြောပါအုံး.လူသတ်နေတာကမင်းတို့ဘာသာဝင်တွေပဲအကြမ်းဖက်နေတာ..လီးဂျီနိုဆိုက်ြိငိနေလား..
U Myint Aung မင်းတို့မွတ်ယုတ်တွေ ရောက်တဲ့နေရာ
Sky King ရဲဖပ်ကတာဝန်အရအကြမ်းဘက်ပြစ်ခတ်သူတွေရှာဖွေနှိပ်ကွပ်ဖေါ်ထုတ်တာဘဲ”ဒါကို’ဘယ်သူဘဲရိုက်ရိုက်ပေါ့”အဓိကနိုင်ငံတော်က’တာဝန်ကျရပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို’လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နေတဲ့’လူရမ်းကားတွေကိုနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်ပြစ်ခတ်လုပ်ကြံသလဲလို့”စုံစမ်းစစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ပြီး’ ‘သတင်း…See More
Koko Aung အမျိုးမစစ်ဇော်မျိုးထိုက် လူကမွေးတာမှဟုတ်ရဲ့လား ခွေးကိုမှပထွေးဆက်တော်ဖို့စဉ်းစားချင်တဲ့ကောင် အပြင်မှာတွေ့ဖူးချင်တယ်အဲဒီမျက်နှာ
Ko Myo Naing Video ရိုက်တဲ့ကောင် ကိုမသတ်လိုက်နင့်အုန်း ဒုတိယ အမှားဖြစ်သွားမယ် ကမ္ဘာက ကြည့်နေပြီ
Zin Moe အကြမ်: ဖက် သမာ: လည်: ရွာသာ:
ရွာသာ: လည်: အကြမ်:ဖက် သမာ.:
ဒါကြောင့် ဒီလို စစ်ဆေး ရတယ်… ဘယ်သူကို မှ ဂရုစိုက် စရာ…See More
Edison Wong စောက်ခွက်ကိုလီးနဲ့ပါထိုးပစ်
Kyaw Thein Maung မအော်နဲ့ မကြာခင်အလည်းရောက်လိမ့်မည်
Az Azmoe လစာနဲ့ကားစီးမရလို့ video ရိုက်ရောင်းကြည့်တာပါ တခါတည်းပါ
Htilar Nang တ၇ားခံများ လူဆိုးလူမိုက် ခိုးဆိုးလုယက်သတ်ဖြတ် နေသူများကို ဖမ်းဆီး မည် စစ်ဆေးမည် ဆိုပါက အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲ ဖြင့် ဒူးထောက်တောင်းပန်ခြင်းနည်းဖြင့် စစ်ဆေးကြ၇န် ဖမ်းဆီးကြ၇န် ….
စစ်ဆေးမေးမြန်းပါက ပွေ့ဖက်နမ် ပြီးး
Like · Reply · 12 ·9hrs
Zeon Freeman actions of these individuals are not justifiable no matter what .. it gotta do with capabilities of our forces .. the culture itself need to be changed
Aung S Naing နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးရဲ့ ကြေငြာချက်ကိုဖတ်ပြီး တကမ္ဘာလုံးထိုင်ရီနေတော့မှာပဲ 😀 😀 ဟဟဟဟ ဓါးမ ကိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ မြန်မာပြည်တွင်ရသည်ပေါ့ဗျာ ။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေ လေးးးးဇားပါတယ်ဗျာ အခုလိုဆက်တိုက်လုပ်သွားဖို့လည်း အကြံပြုလိုက်ပါတယ် ။ ဘုန်းကြီးပါစေ အသက်ရှည်ပါစေ 😀
Daniel Lynn အကြမ်းဖက်ကုလားကို ရိုက်မစစ်ရင် ငှက်ပျောပွဲအုန်းပွဲးနှင့်ကန်တော့ပြီးစစ်ရမှာလား… အကြမ်းဖက်ကုလားတွေသတ်လို့ သေသွားကြတဲ့တပ်မတော်သားနှင့်ရဲသားတွေ အရိုးတောင်မဆွေးသေးဘူး.
Like · Reply · 10 · 8 hrs · Edited
John Tin-Win နောက်ဆို
ရေမျောကမ်းတင် လှေစီးခိုးဝင် ၇၈၆ ဘင်္ဂါလီ မွတ်ကုလားစုတ် အမျိုးယုတ် အကြမ်းဖက်သမားတွေကို …See More
နောက်ဆို အဲ့သလို အားရပါးရ ရိုက်
ယခု ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။
ကန်ချက် ရိုက်ချက်တွေ ရေလည် ပက်စက်တယ်။
ခင်များတို့ ရိုက်နေတဲ့ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရတာ အားမရလိုက်တာဗျာ။
Ko Kyi Lin ရိုက်တာ အပြစ်မဟုတ်ဘူး
ဒီလိုထိလွယ်ရှလွယ်အချိန်မှာ တင်တဲ့ကောင်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ
Ayine Pan တကယ်အပြစ်ပေးရမှာက ဓါတ်ပုံ/ ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ ရဲတပ်သားကို။ ကျန်တဲ့ရဲတွေကို အရေးမယူသင့်ဘူး။
Oo Htay ဇော်မျိုးထိုက်ကိုအရေးယူရမယ်
Mymy Kohtun ထောက်ပြုတ်က ရဲမိုးတို့လိုကောင်
ထောက်ဝင်လုပ်နေထဲးက အစိုးရသစ်…See More
Tin Ngwe ဒါဟာသွေးရိုးသားရိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး အမေစုကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နိမ့်ကျသွားပြီးစစ်တပ်ကြီးစိုးရန် တမင်ရည်ရွယ်ဖန်တီးခြင်းလို့ယူဆပါတယ် ရဲဝန်ထမ်းယောက်ကရိုက်ကူးပြီးဖြန့်ဘို့ဖြူးရန်မစွမ်းသာနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ ချက်ဆိုနားဂွက်ကမီးတောက်ရုတ်မာရန်အသင့်ရှီနေတဲ့စစ်တပ်အောက်မှာရှိတဲ့ရဲကမည်သို့မျှဖြန့်ချီဘို့မဖြစ်နိုင်ပါ သ်ိန်းတရာပင်စင်စားကြီးရုတ်မာတဲ့နေရာမှာကမ္ဘာကျော်တဲ့ နားလေသူကြီးရဲ့ ညွှန်ကြားမှုခသာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
Chocho Nway အဲဒါကရဲမိုးတင်တာလား
Bo Lay မလုပ်မကိုင်တတ်နဲ့တခါခံဘူးတာတောင်နားမလည်ဘူး
AungThu AungThu လက်အောက်ငယ်စားတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလဲထည့်တွက်ပါ။
Ko Kyaw လူ့အခွင့်အရေးဒီလောက်လေးစားနေရင်တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများယခုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေသောရခိုင်ပြည်နယ်သို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သင့်ပါကြောင်းအကြံပြုလိုက်ပါရစေ ခင်ဗျာ၊၊
Moe Min San အမဲသတ်ကွင်း တရားပြသလို သွှေးဆာနေတဲ့ သူတွေကို လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ မနိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ ၊ ဒီပေတံနဲ့နိူင်းပါ ၊ တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေး နဲ့
Min Satt Naung မအေလိုးတွေဖြစ်တုံးကတော့ပြန်မပစ်ပဲနဲ့ပြီးမ မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောနေတာဓားရှီတိုင်းအရမ်းဖက်တာလားမြန်မာတပြည်လုံးမှာဓားရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်မှာလူတိုင်းလက်ထဲဓားကိုင်ထားတယ်ဘာဥပဒေမမရှီတဲ့နိုင်ငံအဲလူတွေကိုပြန်အသေသတ်ကွာလုပ်တိုင်းမခံနဲ့လူဆိုတာတလာပဲသေရမှာ လူတိုင်းတနေ့သေမှာပြန်ချကွာ
တောင်တန်း မြေ သတ်သင့်တယ် ဒါပေမဲ့ လူမသိစေနဲ့ ပေါ့ ငတုံးတွေရယ်
Tin Tun Win ဘာဖြစ်လို့ လိုင်းပေါ်တင်တာလဲ
Kyal Lay ဒါမျိုးလုပ်တာနည်းတောင် နည်းသေးတယ်
Thutha Aung မြန်မာရဲ တွေ လုပ်တယ် ဆိုတာ ထိုင်းကရဲတွေ ခြေဖျား မမှီငေးပါဘူးကွာ
Thitsa Htun ဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ အကြမ်းဖက်ကုလားတွေကိုဒီထက်ဆိုးတဲ့နည်းတွေနဲ့ကိုင်တွယ်နေတာပဲ ရဲတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးနော်
အလင်း မဲ့ တဲ့ကြယ် ခွေးပေါ်ရငါကန်တော့ပွဲပေးစရာလိုလို့လား
Myat Myat San လွဲကုန်ပြီ
Win Min အကြမ်းဖက်သမားဖမ်းပါတယ်ဆို ရိုက်နှက်မ ဖမ်းပဲရှိခိုးတောင်းပန်ပြီး အဖမ်းခံပါဗျာ လို့ ပြောရမှာလား။
ကို ရဲ လွဲကုန်ပီဟေ့
Yan Moe ဒေါ်စုကြည် ကိုတာ
San Oo ဘယ်သူတင်တာလဲ ဒါ သက်သက် တင်တာ မတော်တဆ မဟုတ်ဘူး အမှတ်တမဲ့မဟုတ်ဘူး ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ
Ko Ko Gyi Myanmar police and military are doing this kind of tortures and atrocities everywhere. Need to reform the whole uniformed institution. Don’t show off punishing with this rarely exposed one case. Just punishing one person is not enough as we could see f…See More
Zaw Moe Aung အကြမ်းဖက်ကိုဒီလိုမနှိမ်နင်း
Kaungmoe Naing အဲလို မစစ်လို့ ၂ကိုယ်ကြား ရို ဆန်ဆန်စစ်ရမှာလား ဟ တွယ်သာတွယ်
Mitharsu Pyaw Shwin နောင်ဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးတရားခံဖမ်းရင်ဒုတိဓားသေနတ်ယူမသွားနဲ့ငှက်ပျောသီးအုန်းသီးသပြေပန်းများသာယူသွားကြပါကုန်
ကိုစိုး မင်းထွန်း လူသိလဲလီးပဲပေါ့ကွာချသာချကုလားမတွေလဲမဒိန်းကျင့်ခံရတယ်ဆိုပဲလိုးကားလေးပါတင်ကွာနောက်တခါစောက်ခွက်ကိုလီးနဲ့ထိုးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်
U Myo Hlaing ဇော်မျိုးထိုက် ဆိုတဲ့ကောင်က ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်တာလဲ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရလို့တင်တာလဲ အဖြေမရှိရင်တော့ ဒီကောင်ကို့ တသက်တကျွန်းသာ ချသင့်ပါကြောင်း ။
Ko Lay ရိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာ….လူလိုနေရင်တော့ဘယ်ရိုက်မလဲ…လူအခွင့်အရေးနဲ့ရှင်နေရင်တော့….လည်သာစင်ပေးလိုက်တော့….မီစုရေ
Sai Chit ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တခုကို ရဲတစ်ဦး ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီး ဒီ ဗွီဒီယိုဖိုင်က fbမှာ ပျံ့နံ့သွားတဲ့အပေါ်မှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်နေတဲ့ ကိုယ်မေကိုယ်-ိုးတဲ့ ကောင်တွေက ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ရ…See More
Ko Oo ကိုယ်လုပ်ရင်ကိုယ်ခံဘယ်သူမှအကာအကွယ်မပေးဘူး
Soe Ran Naing ဒီမိုကရေစီတွေ၊ လူအခွင့်အရေးတွေကို မောင်တောဒေသမှာ သွားပြောကြည့်ပါလား ကန်တော့ပါရဲ့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ကုလားကဖျင်တက်ချပြီးလည်လှီးသွားလိမ့်မယ် ကုလားစကားနဲ့ rvဘာသာကလွဲရင် ဘာမှမတတ် ဘာမှမသိတဲ့ကောင်တွေကို ခယနေရမှာလား ကြမ်းကြမ်းကိုင်တွယ်တာမှတော်ကာကျမှ ကုလားကရဲတပ်ဖွဲ့မပြောနဲ့ စစ်တပ်လည်းအင်အားနည်းရင်ဓားနဲ့ဝင်ခုတ်တာပဲ
Win Naing ဗွီဒီယို ရိုက်တဲ့ကောင် တွယ်ပြစ်လိုက်။
← Than Shwe is the Godfather of Min Aung Hlaing and is the owner of the black hand referred by the former president U Thein Sein, responsible on all the atrocities on Muslims of Myanmar
Look at the Myanmar soldiers holding Petrol Jerry Cans and burnt Rohingya houses and bodies →
One thought on “DASSK R U not ashamed of the racist criminal comments under your posts? Keeping all these CRIMINALS’ comment also made DASSK’s FB admin committing crime”
Self incriminating evidences of Non-Muslim Myanmars’ racist minds.